Nhau - Kugadzwa kweina nitroimidazoles uye avo masetetetetetti mune zvekudya zvinobva mumhuka - liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Kugadziriswa kweina nitroimidazoles uye avo masetetetetetti mune zvisikwa zvezvipfuwo - mvura chromatography-tandem mass spectrometry
Kudya chengetedzo ongororo yekufambisa
Thermo Sayenzi Hupenyu Sayenzi MS haina chete ine yakareba tsika yehunyanzvi, asi zvakare inoramba ichivandudza. Quadrupole mashoma ongororo yechokwadi conjugate hyperboloids inoenderana neyakakwana dzidziso magetsi munda webhuku rinoshandiswa pane ese TSQ® katatu katatu quadrupole maseru masekrameter. Kubva payakatangisa yepasi rose katatu katatu quadrupole MS / MS (TSQ®) mass spectrometer muna 1980, TSQ® katatu quadrupole mass spectrometer yakashandiswa zvakanyanya mukuchengetedza kwezvakatipoteredza, kurima, kupatsanura, kuchengetedza chikafu, nezvimwewo Ongororo yekuongorora, inokwanisa zvakakwana kuyedza maitiro. kuyedzwa kwemazana emazana ezvirimwa zvezvirimwa, zvipfuyo uye zvigadzirwa zvehuku, zvigadzirwa zvemukaka uye zvimwe zvinoenderana nezvakadyiwa, senge mishonga yekuuraya zvipuka muzvikafu, mishonga yemhuka, mycotoxins, zvinowedzera, Nutritional Supplements uye organic zvakasvibisa Uye mamwe mapurojekiti ekukubatsira iwe kusangana nyore zvinowedzera kuomarara zvinodiwa nemitemo.
5-nitroimidazoles kirasi yemishonga ine 5-nitroimidazole mhete chimiro, ine anti-protozoal uye antibacterial chiitiko. Bvunzo dzezuva nezuva dzinosanganisira sampu dzinotorwa nemhuka senge zvipfuyo, zvigadzirwa zvemumvura, zvigadzirwa zveuchi, uye zvigadzirwa zvemukaka. Chinyorwa ichi chinoreva SN / T 1928-2007, GB / T 21318-2007, GB / T 22949-2008, GB / T 21995-2008, Ministry of Agriculture 1025 Announcement-22-2008, Ministry of Agriculture No. 1486 Announcement- 4-2010, SN / T 2579-2010, yakareruka kubva kuGG / T 23410-2009, GB / T 23407-2009, GB / T 23406-2009, inzira yechiridzwa yekutsvaga nekukurumidza kweakasiyana nitroimidazole zvinodhaka zvakasara, zvemukati nzira yakajairwa Kuwanda.
Zvezvinhu zvakafanana zve reagent, zvakajairika kumisikidzwa uye matura, uye nzira dzekugadzirira nzira, ndokumbira utarise kune ari pamusoro matanho. Nezve nzira dzinoenderana dzechiridzwa, ndapota tarisa kune ichi chinyorwa (TSQ Triple Quadrupole Mass Spectrometer Concise Yekushandisa Chinyorwa - Chikafu Kuchengetedza Kwayedza)
Iyo TSQ Triple Quadrupole LC / MS sisitimu yakarongedzwa neiyo Ultra-yakakwira yekumanikidza mvura chikamu chikamu.
Liquid chikamu mamiriro
Misa spectrometry mamiriro
Chaicho chromatogram (yakatorwa kubva kuGG / T 23410-2009 appendikisi)
Pakati pemaitiro epasirese ekuonekwa kwenyika, muganho wekutora zvinodhaka zveNitrofuran mune matrices akasiyana ndeye 1.0-5.0 μg / kg. Maitiro acho anokwanisa zvizere kusangana nezvinodiwa mudzimba uye zvepasi rose zvinodzora zvimiro zvekunzwisisa uye kubereka patsva kwenzira dzechinyakare dzemitemo
Post nguva: Feb-01-2021
Hebei Kexing Mishonga Co., Ltd.